Hiddink oo rajo ka qaba kaalmaha hore - BBC News Somali
Hiddink oo rajo ka qaba kaalmaha hore
Image caption Tababaraha ku meel gaarka ah ee kooxda Chelsea, Guus Hiddink.
Tababaraha ku meel gaarka ah ee kooxda Chelsea, Guus Hiddink, ayaa sheegay in uu rumaysanyahay in ay wali awoodaan in ay ka mid noqdaan afarta koox ee ugu dhibcaha badan marka uu dhamado xili ciyaareedkan, kaddib markii ay saddex iyo eber kaga badiyeen Crystal Palace.
Kooxda Chelsea lagama badinin afar ciyaarood laakiin saddex iyo toban dhibcood ayay ka hooseeyaan kooxda Tottenham oo hadda kaalinta afraad ku jirta, kaalintaas ciddii gasha marka uu xili ciyaareedka horyaalka Ingiriisku dhamaado waxay ka qaybgashaa koobka horyaalka Yurub, Xili ciyaareedkan waxaa u dhiman 19 ciyaarood.
Hiddink, oo 69 jir ah wuxuu sheegay in horyaalkuu uu sii adkaanayo kooxkastana ay ka badin karto kooxaha kale.
Wuxuu intaas ku daray in aysan sahlanayn in ay kaalinta afraad ku dhameeyaan xili ciyaareedkan balse ay suurtagal tahay inkasta oo jid dheer ka sokeeyo.
waa markii u horaysay ee afar ciyaarood oo isku xigta aan laga badinin xili ciyaareedkan Kooxdan difaacanaysa horyaalka, waxayna hadda ku jiraan kaalinta afar iyo tobnaad iyaga oo lix dhibcood ka sareeya saddexda kaalin ee ugu hooseeya.
Hiddink oo badalay tababarihii la eryay ee Jose Mourinho bishii December, wuxuu helay guul ay aad ugu baahnayd Chelsea, goolasha guushana waxaa kala dhaliyay Oscar, Willian iyo Diego Costa.